Kuyini floor PVC futhi kanjani ukukhetha PVC phansi? - Isazi seZD Floor
Ikhaya>Kuyini floor PVC futhi kanjani ukukhetha PVC phansi?
Hlela: UDenny　2019-12-03
Kuyini phansi kwePVC
Ngokusho kwesakhiwo, i-PVC flooring ihlukaniswe izinhlobo ezintathu: uhlobo lwenhlanganisela olunezinhlaka eziningi, uhlobo lwenhliziyo enenhliziyo eyodwa nohlobo lwehomogeneous.
1. I-Multi-layer composite compoundite PVC floor: Amaphansi anezakhiwo ezinengqimba eziningi ngokuvamile akhiwa ngokulambisa izingqimba zezakhiwo ezi-4 kuya kweziyi-5, futhi ngokuvamile anezendlalelo ezingahambisani (kufaka phakathi ukwelashwa kwe-UV), izingqimba zamafilimu eziphrintiwe, izingqimba zefayibha ezingilazi, kanye negwebu elinwebekile. Isendlalelo, isendlalelo sisekelo, njll.
2. Isisekelo se-PVC esibonakala singenakubonakala kwenhliziyo: Okuqukethwe akunamuntu ngokusebenzisa phezulu nangaphansi, okungukuthi, kusukela ebusweni kuya phansi, kusukela phezulu kuya phansi, umbala ofanayo.
Okwesibili, ulwazi lokuthenga kwesitezi sePVC
Ubukhulu bephansi le-PVC bunqunywa ikakhulu yizici ezimbili, okungukuthi ukushuba kongqimba lwe-primer kanye nobukhulu boqimba olungavimbeki. Okwamanje, ubukhulu obukhulu kakhulu bengqimba ye-primer emakethe yilezi: 2.0mm, 2,5mm, 3.0mm, futhi lezi zinhlobo ezintathu, futhi ubukhulu bezingqimba zokugqoka yilezi: 0.12mm, 0.2mm, 0.3mm, 0.5mm, 0.7mm, njll. Ngokomthetho, ubukhulu buphansi, isikhathi eside impilo yenkonzo, ikakhulukazi ubukhulu bokunqwabelana kokuqokwa, intengo ephakeme. Abathengi abaningi banokungaqondi okukhulu lapho bethenga i-PVC flooring, okungukuthi, babheka intengo kuphela futhi ababuzi ngobukhulu obukhulu. Abathengi kufanele bathole ibhizinisi lobuchwepheshe lokuphamba phansi kwePVC okufanele balithenge .. Ngokuvamile, amakhaya asebenzisa ukufakwa kwamapulasitiki ngobukhulu obungu-2.0mm kuya ku-3.0mm kanye nogqinsi olungahambisani no-0mmmm kuya ku-0.3mm.
ukuthengwa kwe-pvc floor
2. Izinto ezingasebenzi kahle nezinqubo zokukhiqiza
Isitezi se-PVC siyinhlanganisela yesendlalelo se-primer, ungqimba lwamafilimu aphrintiwe futhi ungqimba oluvimbelayo.Ikhwalithi lalezi zinto ezintathu zokusetshenziswa linquma ngqo ikhwalithi yephansi le-PVC.
3. Inqubo yokukhiqiza
Okusho ukuthi, inqubo yokuhlanganisa lezi ezintathu ezingenhla ihlukaniswe izinhlobo ezimbili: ukucindezela okushisayo nokukhipha.Izindleko zokucindezela okushisayo ziphakeme, ikhwalithi iqinile, kanti ungqimba olungavimbeki luyathandeka ukukhipha.
Abathengi abaningi abanaki ikhwalithi yokwakha, empeleni, amabhizinisi amaningi namaqembu okwakha awakunaki lokho, futhi bamane babhekana nebhizinisi. Njengoba isisho sihamba, amaphuzu amathathu namaphuzu ayisikhombisa okwakha, i-PVC floor floor ngemuva kokuphothulwa komphumela ojwayelekile, into ebaluleke kakhulu izinga lokwakhiwa, ukuzakha ngokwakha ngesikhathi sokwakha nakho kubalulekile kakhulu, amakhasimende amaningi okuthuthukisa ikhaya ezwe ukuthi amazinga okuzimela nawo ayakhokhisa, Abafuni ukwenza amazinga okuzilinganisa nokulinganisa, futhi badinga ukuthi zibekwe ngqo emhlabathini wokuqala; kunamabhizinisi amaningi angaziniki amazinga okuzenzela ukuze onge izindleko zokwakha. Ukuzakha okuzimele kumele kwenziwe ngokuhambisana nenqubo yokwakha, uma kungenjalo ukungalingani kwepulasitiki le-PVC kuvame ukungalingani.
ukufakwa kwesitezi se-pvc
Impilo yensiza yanoma yimuphi umkhiqizo ayihlobene kuphela nekhwalithi yomkhiqizo uqobo, kodwa futhi nokusebenzisa komthengi lokho. Inqobo nje uma isetshenziswa okujwayelekile, impilo yenkonzo yokufakwa phansi kwePVC ingaphezulu kweminyaka eyi-10. Kodwa-ke, noma ingasetshenziswanga ngendlela ejwayelekile, noma isitezi esihle kakhulu asikwazi ukusukuma sicasuke.
Kuyini floor PVC futhi kanjani ukukhetha PVC phansi? Okuqukethwe okuhlobene
I-Cement self-leveling level ephelele ibumba usimende olusebenzisa usimende, oluhlanganiswa ikakhulukazi ngezinto zokwenziwa ze-samente ezakhiwe usimende, ama-aggregates amahle, amafilimu nezengezo. ...